6 mafirimu aunogona kuona pamberi pekupera kwaJune | Bezzia
6 mafirimu aunogona kuona pamberi pekupera kwaJune
Maria vazquez | 18/06/2022 22:00 | Nhau
Kurwisa kudziya kwakanyanya kwatiri kuita mazuva ano, hatigone kufunga nezvechirongwa chiri nani kupfuura vapotera munhandare yemabhaisikopo. Bhaisikopo rakanaka, mhepo inofefetera… Hapana chimwe chinodiwa! Mafirimu matanhatu aya akatsikiswa kupera kwesvondo rino kana kuti achange ari anotevera. Nyatsozviona!
1 Huremu husingagoneki hwetarenda rakakura
2 Hatizourayane nepfuti
3 unofanira kuuya kuzozviona
4 Camila ari kubuda manheru ano
6 Nhare mbozha
Huremu husingagoneki hwetarenda rakakura
Inotungamirwa na Tom Gormican
Mutambi Nicolas Cage, Pedro Pascal naAlessandra Mastronardi
Nhoroondo anotevera mutambi Nicolas Cage, uyo ari kushuvira kutora chinzvimbo mufirimu reQuentin Tarantino. Pamusoro pazvo, ane ukama hwakaoma zvikuru nemwanasikana wake ari kuyaruka uye ane chikwereti chakadzika. Zvikwereti izvi zvinomumanikidza kuti aoneke kumabiko ebhavhadhe remuridzi wekuMexico uyo anofarira basa remutambi uyu mumabhaisikopo ake apfuura, achida kumuratidza script raange achigadzira.
Paanenge achibatana nemurume, CIA inomuudza kuti bhiriyoniya ndiye a drug cartel kingpin uyo akapamba mwanasikana weaikwikwidza chigaro chemutungamiri weMexico. Mushure meizvi, anotorwa nehurumende yeUnited States kuti awane ruzivo.
Inotungamirwa na Mary Ripoll
Inoridza Ingrid Garcia Jonsson, Elena Martin, Joe Manjon
Ipo dhorobha richigadzirira kupemberera mutambo waro mukuru, iyo Mhandara del Mar, Blanca anoyedza kuona kuti yekutanga paella yaanogadzirira muhupenyu hwake yakakwana. Akwanisa kuunganidza shamwari dzake yehupenyu hwose mushure memakore pasina kuonana. Vamwe vakaedza kupinda muguta, vamwe kunze kwenyika uye mumwe akasara mumusha. Vese vari mumakumi matatu uye vanonzwa kuti hudiki hwavo huri kutsvedza.
Hupenyu hwavo hunofamba pakati pekusachengeteka kwebasa, kusagadzikana uye kutanga kunoramba kuchienderera mberi. Iyo paella inogara kusvika manheru, pakati pezvakazarurwa zvezvakavanzika, kushorwa uye kusanzwisisana. Uye, pakupedzisira, verbena inosvika: uchapupu hwokuti nyika inoramba ichitendeuka apo hupenyu hwevanopikisa hunoita sehunopera uye kupfuura nakare kose vachada mumwe nemumwe kuti aende mberi.
unofanira kuuya kuzozviona
Inotungamirwa na Jonah Trueba
Vatambi Itsaso Arana, Francesco Carril, Irene Escolar
Mbiri mbiri dzeshamwari vanosangana zvakare. Vanoteerera mimhanzi, kutaura, kuverenga, kudya, kufamba, kutamba ping-pong ... Zvinogona kunge zvisingaite sezvizhinji zvefirimu, ndicho chikonzero "iwe unofanirwa kuuya kuzoiona".
Camila ari kubuda manheru ano
Inotungamirwa na Ines Maria Barrionuevo
Ari kutamba naNina Dziembrowski, Maite Valero, Adriana Ferrer, Carolina Rojas, Federico Sack naGuillermo Pfening
Camila anotarisa vakamanikidzwa kutamira kuBuenos Aires apo mbuya vake vanorwara zvakanyanya. Anosiya shamwari dzake uye chikoro chakasununguka cheruzhinji chechikoro chechikoro chepamusoro chechikoro chakazvimiririra. Kushatirwa kwaCamila asi nguva isati yakwana kunoiswa pamuedzo.
Inotungamirwa na Baz Luhrman
Achitamba Austin Butler, Tom Hanks naOlivia DeJonge
biographical film kutenderedza hupenyu nemimhanzi yaElvis Presley, achitarisa pahukama hwake hwakaoma nemumiriri wake asinganzwisisike: Colonel Tom Parker. Iyi bhaisikopo inoongorora kuomarara kwesimba pakati paPresley naParker mukati memakore anopfuura makumi maviri, kubva pakusimuka kwaPresley kusvika mukurumbira kusvika pakusimba kwake kusati kwamboitika. Zvese izvi kuseri kwechidzitiro chekushanduka kwetsika uye kukura mumagariro muUnited States. Pakati perwendo irworwo mumwe wevanhu vakanyanya kukosha uye vane simba muhupenyu hwaElvis, Priscilla Presley.
Inotungamirwa na Scott derrickson
Vatambi Mason Thames, Madeleine McGraw naEthan Hawke
mhondi ine utsinye anoba Finney Shaw, mukomana anonyara uye akangwara ane makore 13 okukura, ndokumuvharira muimba yepasi isinganzwi inzwi umo kuchema kwake kusina maturo. Kana runhare rwakatyoka uye rwusina Indaneti parinotanga kurira, Finney anoona kuti kuburikidza nazvo anogona kunzwa manzwi evakamboshungurudzwa, avo vakatsunga kudzivirira Finney kuti asazongofanana navo.
Unoda kuona mamwe emafirimu aya? Vamwe vacho vatove mudzimba dzemitambo. Tarisa bhodhi reguta rako kuti uzive mafirimu auri kuona izvozvi. Uye kana iwe uchinzwa kuda kunakidzwa nekutevedzana kumba zvakanyanya, tarisa ichangoburwa netflix inoburitswa kana HBO.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » 6 mafirimu aunogona kuona pamberi pekupera kwaJune